ကျား/မ- ကျား(မိဖုရား လေးဦးရှိသည်)
ဦးမာဃ ကြီး တစ်ယောက် …
လက်တစ်ဖက် ဟိုဟာကြီး ဆွဲ၊ နောက်တစ်ဖက်ကလည်း ဟိုဟာကြီး ကိုင်ပြီး …
ဟိုဟာကြီးကိုလည်း ခွစီးလို့ စာရင်းထဲ ဒုံးစိုင်း ပြေးဝင် သွားပါဂျောင်း ….
(ဒုတိယ စာရင်းပုံစံ – Moe Z ၏ အောက်ကို ကြည့်ပါ )
ဘာတွေ ဆွဲ ဘာတွေ ကိုင်ပြီး
ဘာတွေ ခွ စီးပြီးဝင်တာလဲ
ဦးမာဃ က ဒုံးစိုင်း ပြေးမ၀င်ဘူးကွဲ့
ဘယ့်နှယ့် နငယ်က အောက်ဆုံး ရောက်ရသလဲကွယ်…
ဂီး … ဂီး …
မင်းတို့ “န” တွေရှေ့မှာ space ပါပြီး လွတ်နေလို့။
blacklover မသိတဲ့ ဟီးးး
ဟီး နာ့နာမည်လဲ ပါဘူး
နီလေး …. နင့်ဂို တူဂ ရုပ်ဆိုးလို့ မထဲ့တာတဲ့ နာ့ဂိုလာကြောဒယ် ။ ;)
ကြည့်စမ်း.. မဟာရာဇာ ကြီး ရဲ့ စာရင်းတွေ ကို အခုမှ သိရတော့တယ်။
တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဆွဲစေ့ပစ်မယ့် “ မဟာရာဇာကြီး ” တစ်ကယ်မလွယ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ က စီအိုင်အေ အေးဂျန့် များ ဖြစ်နေမလား ။
နံပါတ် (၁၅) နဲ့ (၁၆) ကြားထဲကို ကြည့်လိုက်ပါဗျာ ..
အဲဒါလေး ဟုတ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
မဟုတ်ရင်လည်း ပြောပေါ့ဗျာ .. နော့ ..
Burma ဆိုတာ ကျားဖြစ်ပါတယ်ကွဲ့ 
ကိုအန်စာတုံးရေ … ကိုအာဂက လူသာသေးတာ … ဖျာကြီးကြီးခင်းထားတယ် … ဟိဟိ
ဒီလိုကြည့်တော့လည်း ရွာထဲမှာ လည်ပတ်နေသူတွေ … အများကြီးဆိုတာတွေ့ရတယ် … ။ ဒါနဲ့ .. အမြဲတမ်း .. ဒီ list က update ဖြစ်သလားဟင် … ။
ဟုတ်ပ ကျွန်တော်က နေရာကြီးကြီး ပေးဝယ်ထားတာဂျ..ကိုအံစာတုံး ကို အရက်တိုက်ပြီးနေရာကြီးကြီးတောင်းထားတာ
အခုစာရင်းပေးလို့ရသေးလားရှင့်။ ကျွန်မရွှေကြည်ပါ။ မ ပါရှင့်။ အသက် 28 အပျိုကြီးပါရှင့်။
ကျွန်တော့်နာမည်လည်း ကျန်တယ် ….. yuiio ……. ကျား ဗျ …… ကျား ။
အော် မရွှေကြည်ကလဲ ကြော်ငြာထိုးသကိုး ကဲကဲ အသိုးစာရင်းထဲ ဟုတ်ပေါင် အပျိုကြီးစာရင်းထဲ ထည့်ပေး လိုက်ပါဦး
မရွှေကြည်ကကြော်ငြာထိုးတာမဟုတ်ရပါဘူး မိန်းကလေးတွေကအပျိုကြီးဆိုတာဝန်မခံချင်ကြဘူးလို့ပြောကြလွန်းလို့ ကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ညာပြောချင်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ် အဲဒါကြောင့်..။ အပျိုကြီးဖြစ်ကြောင်းရဲရဲတောက်ပြောပြတာ။ ဘာသဘောမှမပါပါကြောင်း
မတွေ့တာ မထည့်ရသေးလို့ပါဗျာ ..
ကျုပ်လည်း ခေါင်းမူးသွားဒယ် ..
ခီများရဲ့ မန်ဘာလင့်ကို ရှာမတွေ့လို့ …
အဲဒါလေး ပေးပါလား … လို့ …
ကျုပ် ဟိုကွက်လပ်ကြီးကို ဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ကြာပြီဗျ ..
အဲဒါ ခုထိ ကြံလို့ ဖန်လို့ကို မရဘူးဖြစ်နေတယ် …
အဲဒါလေး ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပါဦးဗျ ……. ။
နာပါတယ်တော့၊ များက ထင်ရှားပါတယ်ရှင့်၊ ယောက်ျားပါတော့။
ကိုအံစာရေ………. ငြိမ်းနာမည်လည်းမပါဘူး။ ငြိမ်းက ၀င်တာမကြာသေးတဲ့ member အသစ်လေးပါ။ နာမည်လေးထည့်ပေးပါဦးနော်။ မိန်းကလေးပါရှင်။
ကျွန်တော်ရဲ့ဂေဇက်လင့်ကhttp://www.myanmargazette.net/author/sweettooth ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီး ထည့်ပေးပါဦး။
သတင်းကို ဓာတ်ပုံနဲ့ တွဲပြီး တင်တာ ဓာတ်ပုံ မပေါ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ပြောပြပါအုံး။
ကျနော် ကိုလည်းဖော်ပြပေးပါဦး။ ကျနော် မန်ဘာဝင်တာ မကြာသေးပါဘူး။
ကျနော် သိထာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို တင်ချင်တာဘယ်လိုတင်ရမလဲမသိလို့ပါ။
မြန်မာအစိုးရက. ဘလက်ခ်လစ်စ်ဆိုပြီး လူ၆၀၀၀ ရှိတယ်..။ အဲဒီထဲက.. ၂ထောင်ကျော်ကို “ဖျက်ပေးလိုက်ပါသည်” ကြေညာလိုက်တော့..
“အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးလုပ်နေပါသည်” ဆိုတဲ့သူတွေက. အဲဒီစာရင်းထဲ ပါချင်သွားကြရော…
2. Aunty Moe (antimoe)
စရင်းမှာ ပါဖို့ မပါဖို့ထက် အရေးကြီးတာက ဝင်ရေးလို့ရဖို့ရယ်-
ဝင်ဖတ်လို့ရဖို့ အဓိကပါ လူကြီးမင်းတို့ –
အပင်ပန်းခံ စရင်းပြုစုနေတဲ့ ကိုအံစာကိုလဲ လေးစားမိပါတယ် –
အစ်မရေ ကိုခြောက်မျက်နှာ အပ်ပတူဒိတ် ထားတာဒေါ့ဟုတ်တယ် ။ နံပါတ်စဉ်တွေက တစ်ယောက်ကျော်လိုက် နှစ်ယောက်ကျော်လိုက်နဲ့ ……. ဟီး ။
မြေကွက်တွေကလဲ တစ်ချို့တွေက အပိုဝယ်ထားဒါထင်ဒယ်… နေရာတွေအကျယ်ဂျီးပဲ…
စာများများ ရေးပါ မကြည်ပြာ ရယ်
အော် ရွာထဲမှာလည်း လ၀က စက်ရှင်အရာရှိကြီးရှိသကိုး၊
ကျွန်တော်တို့က နောက်မှရောက်တဲ့ရွာသားမို့ သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ရမှာလား၊ ဧည့်စာရင်းနဲ့ဘဲနေရမှာလား အဖြေလေးပေးပါအုံး လူကြီးမင်းခင်ဗျ။
သဂျီးရဲ့ဟိုဘက်ပို့စ် က ယူလာတာ။
လောလောဆယ် မန့်လို့ရတဲ့အဆင့်ထဲတော့ရှိနေသေးတယ်။ စာရေးလို့ရတဲ့အဆင့်ထဲ အနော်တို့ကောပါဦးမှာလားဟင်။
thethtet87 ပါ။ကျားပါ။ကိုပေါက်နဲ့ nigimi77 တို့က
Ma Ei နံမည်လေးလဲ စာရင်းထဲမှာမတွေ့သေးလို့
ဒီစာရင်းကြည့်မိမှ ပျောက်နေတဲ့ ရွာသူားတွေ အများကြီးပါလားနော်။
အခုမှ ကြည့်မိတယ်… ရက်စက်ပါပေ့…
တော်ဘီ… ဆွေခန်းမျိုးခန်း ဖြတ်မှပဲ…
ဆရာကြီး ကျွန်တော် လူတလုံး (ခ) ရေမြေ့သနင်း မပါသေးပါကြောင်း…
ယောကျာင်္း.. ၂၉ နှစ်.. အိမ်ထောင်သည်.. ယူထားတာ မကြာသေး…
အလုပ်အကိုင် အိုင်တီ… စာလဲ ရေး.. ကဗျာလဲရေး.. သီချင်းလဲရေး… မြေပွဲစား… ဟိ.. ဂုဏ်သတ္တိတွေ…:)
အခုမှ သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ အဲ့ထဲမှာ ကျားစစ်စစ် တစ်ယောက်ပဲ ပါတယ်နော်။